Uma ufuna uchwepheshe ukugeza imoto yabo ngaphandle waphendukela ochwepheshe, kumele ube amanzi eliphezulu nge ingcindezi ezinhle, kagesi amandla grid 220 volts, amanzi kanye, yebo, ukugeza mini-moto. Ngenhlanhla, ububanzi lanamuhla kwezimpahla efanayo sikhulu ngokwanele, futhi njengendlela producer abaningi bakhetha ukucwila "Karcher" ngoba imishini yokuwasha. Namuhla sizobe achithe isikhathi ngokunembile lokhu umakhi German futhi uthole yonke nenqubo yokukhetha idivayisi oyifunayo.
Kungani "Karcher" ngoba umshini wokuwasha?
Izibuyekezo abashayeli bathi lokhu inkampani ingenye abakhiqizi umhlabeleli mini-echibini. Lokhu nkampani yasungulwa emuva ngo-1935 A. Karcher, ngemva kwalokho, ngo-1950, inkampani yokuqala yasungulwa futhi enelungelo lobunikazi idivayisi entsha ukuze amanzi lokushisa eliphezulu ngaphansi kwengcindezi okusezingeni eliphezulu. Kusukela ngaleso sikhathi, ukuthandwa lentwana awapheli. Thenga umshini wokuwasha ukwenziwa "Karcher" kungenzeka nje kuphela e-Germany kodwa futhi e-United States, Japan neRussia. Emhlabeni wonke, ifemu uhlonishwa futhi kwafunwa. Futhi sonke ngoba "Kärcher" - siyimfanelo German hhayi kuphela, kodwa futhi iwaranti seminyaka emibili ngenxa operation elingenazinkinga. By the way, ebhokisini mini-egeza ngamunye kakade emananini ukupakisha Foam wezindlu, ephezulu ingcindezi hose futhi umshini, zonke izinhlobo izandiso isibhamu.
Indlela ukukhetha "" "Karcher" ngoba umshini wokuwasha? Izibuyekezo kanye Izincomo
Okwamanje, umenzi ukhiqiza 3 izinhlobo imoto izona izimoto. Eyokuqala wabo - amadivaysi entry level. Ziyakwazi eziphansi, usayizi compact nesisindo ukukhanya. Ngokuvamile, la mathuluzi asetshenziselwa ukusetshenziswa short-term. The main injongo wokugeza - yokuhlanza ukungcola e ezincane eziningi. Futhi uma ekhaya lakho kuwufanele runabout uhlobo "Daewoo Matiz", leli thuluzi kufanelekile kuwe ncamashi.
Okulingene (ie, wesibili ilandelana) ekilasini ithandwa kakhulu futhi iningi esetshenziswa phakathi abashayeli European futhi Russian. K5 Series - ekahle abanikazi zonke izimoto ezithwala futhi ezimotweni. Futhi, lezi amayunithi Site imindeni emikhulu ngezimoto elilodwa noma amabili. By endleleni, "Matiz" yokuhlanza ezinjalo ngeke naso singase siphumelele. Umahluko owokuthi esikhathini kanye nezindleko imisebenzi.
Futhi isigaba sokugcina - okusezingeni eliphezulu. He is ukuyedlula, enamandla kunazo, futhi ngenxa yalokho, eqolo wonke amathuluzi, "Karcher" ngoba imishini yokuwasha. Izibuyekezo Ochwepheshe bathi lezi amathuluzi mahle izikhungo professional leyo bekwi ukuwasha izimoto eziningi ezinkulu. Ukusebenzisa amadivaysi ezinjalo izimoto okungalungile, njengoba ingcindezi 160 ibha okungenani ingxenye yesine ngeke isetshenziselwe nezinye izinjongo. Uma ufake leli thuluzi at zigcwele, ungavele ilimaze izimoto upende. Kodwa ogandaganda namaloli, ezifana amadivayisi ngesikhathi.
Njengoba ubona, ekahle mini-echibini kungashiwo ngempela okubhekwa 'Kärcher "(I-imishini yokuwasha). Izibuyekezo isiqinisekiso.
Drops "Gormel": kuzibuyekezo, izintengo, imiyalelo